Wasiirka arrimaha Gudaha”Deegaanada Qaar Gole deegaan lagama hirgelinkaro sababo Amni” – Radio Muqdisho
Waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya shir ay hogaaminayso Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya oo shalay Muqdisho Furtay Shir looga hadlayey dhisiadda Golaha Deegaanka ayna ka qeyb galeen Wasiiradda Arriamaha Gudaha Maamul Goboleedyadda iyo mamulka Gobolka Banaadir,iyadoo ay ka bilowdeen qeybo akmid ah gobolada Dalka.
Shirka oo wadatashi ah ayaa inta uu socdo waxaa looga hadlaya dhismaha Golaha Deegaanka ee dhamaan Degmooyinka Gobolada Dalka,waxaaan barnaamijkani taageeraysa Hey’adaha kashaqeeya Arrimaha Hormarinta Deegaanka ee Jimciyadda Qurumaha ka dhexeysa.
Wasiiradda Arrimaha Gudaha ee Maamuleedyadda dalka ayaa sheegay in intooda badaan meel wanaagsan u marayo dhisitaanka Golaha Deegaanka iyo dhameystirka Sharciga Golaha Deegaanka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa tilmaamay in deegaanadda qaar aysan suurto gal aheyn in laga sameeyo Gole Deegaanka Xaalad Amni awgeed balse Deeganada kale sida ugu dhaqsiyah badan looga hirgalin doono.
Wasiir Juxa waxaa kale oo uu sheegay in looga baahan yahay Maamul Goboleedyadda inay qeyb ka qaataan in lameel mariyo Sharciga Gobolaha Deegaanka si-dhaqso loo helo Gole Deegaan.
Hadda waxaa Golaha Deegaanka sameystay oo kaliya dhamaan Degmooyimka Soomaaliya Degmadda Xudur ee Gobolka Bakool oo kaliya waxaana ay ka kooban yihiin 27 Qof.
Balse waxaa soconaya dadaalo ku aadan sidii gobolada kale loo gaarsiin lahaa dhismaha golayaasha deegaanka,taasi
Daawo+Sawiro: Bilicda iyo Dibu dhiska Saldhigga Degmada Hodan